ရန်ပိုင်| December 25, 2012 | Hits:14,616
ယာဉ်တိမ်းမှောက်၍ ကားကြုံလိုက်စီးသည့် ဆရာမ ၂ ဦးသေဆုံးဘန်ကောက် အဲဝေး ချင်းမိုင်-ရန်ကုန်-မန္တလေး တိုက်ရိုက် ပျံသန်းမည်လူသားရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ MH17တဆင့်ခံ စစ်ပွဲရဲ့ ဓားစာခံ MH17ရုရှား ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်များ မလေးရှားတွင် နက်ရှိုင်းလာနေ
yemyn December 25, 2012 - 3:17 pm Every airline in Myanmar must be careful and lesson learned for other air lines.Every passengers life in your air lines hand.(Safety first before flight and choice the good quality pilot).
Reply pnwara December 25, 2012 - 7:10 pm အင်း-သတင်းတွေကလဲ တမျိုးစီပါလား- အစိုးရ သတင်းကတမျိုး-၀က်ဆိုက်ပေါ်က ဂျာနယ်သတင်းတွေက တမျိုး တဘာသာ-ဘယ်ဟာက အမှန်လဲဗျာ-လေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့ သတင်းကတော့အားလုံးတူ တယ်။ ဒါတောင် သတင်းတခုက အဲယားပုဂံ ကွင်းမှားဆင်းသက်လို့သတင်းခေါင်းစဉ်တပ်ထားတော့ လေယာဉ်မှူး ညံ့လှပါလားဟု ကောက်ချက်ချမိ၏။ သတင်းဆုံးအောင် ဖတ်တော့မှ အော် ဒီလိုပါလားဟု သိရတယ်။ ဗိုလ်တင်ဦး ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျ သေဆုံး စဉ်က အစိုးရ ကြေငြာသလို ရာသီဥတု ကြောင့်ပျက်ကျရတယ်ဆိုတဲ့ ယုတ္တိကင်းမဲ့တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်သူမှ မယုံကြည်ကြဘူး။ ရာသီဥတုကောင်းတယ် မကောင်းဘူးဆိုတာ အဲဒီဒေသက လူတွေသိနေတာဘဲ- အချိန်ကာလအရ ရာသီဥတု ဖေါက်ပြန်ချိန် ဟုတ်-မဟုတ် စဉ်းစားတတ်သူတိုင်း သိနေတဲ့ကိစ္စ- အခုလဲ ဆီးနှင်းတွေကျလို့ ဆိုတာ ဆောင်းတွင်းအခါမို့ဖြစ်နိုင်တယ်ထားပါဦး- အချိန်က မနက် ၁၀ နာရီ ထိုးခါနီးပြီဆိုတော့ မြူမှူန်ဝေကင်းလောက်တဲ့အချိန်ရောက်နေပြီ- လိမ်တော့ မလိမ်ကြပါနဲ့အမှန်တိုင်းထုတ်ပြန်ပေးကြပါ။
Reply James December 25, 2012 - 7:47 pm မောင်တေဇကလဲ..လေယဉ်မထွက်ခင်…ETကို…ဘာမှမတိုင်ပင်ဘဲထွက်တာကိုး….ကျွတ်ကျွတ်ကျွှတ်(စုတ်သပ်တဲ့အသံ)
Reply ??? December 26, 2012 - 1:18 am Air Pagan က လူအသေအပျောက် မရှိဘူးလို့လည်း ကြေငြာတယ်။ ခရီးသည် တစ်ယောက်
Reply ပြည်သူ December 26, 2012 - 10:17 am ခရီးသည် ၆၅ ဦး လိုက်ပါလာသည့် အဆိုပါလေယာဉ်သည် ဟဲဟိုးလေဆိပ်သို့ ဆင်းသက်ရန် ၂ မိုင်ခန့်အကွာသို့ ရောက်ရှိပျံသန်းနေစဉ် ရုတ်တရက် လယ်ကွင်းအတွင်းသို့ အရေးပေါ် ဆင်းသက်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Reply mgoogyaw December 26, 2012 - 9:37 pm News are wrong. They have mentioned2persons died,but, The Tour Guide,11 year old boy,and victim from the ground, motor bike man U Pyar, total 3. Why,they say only 2? How to understand. Burma,is still the same like before,all the news are secret for their sake.WHY???